Mudavadi oo ku baaqay in aan loo noqon rabshadihii 2007-dii | Star FM
Home Wararka Kenya Mudavadi oo ku baaqay in aan loo noqon rabshadihii 2007-dii
Mudavadi oo ku baaqay in aan loo noqon rabshadihii 2007-dii
Madaxa xisbiga ANC Musalia Mudavadi ayaa soo jeediyay in nabadda lagu daaalo ka hor doorashada guud ee sanadka 2022-ka.
Waxaa uu ka digay arrin kasta oo wadanka u horseedi karto inuu dib ugu laabto rabshadihii dhacay dhammaadkii sanadkii 2007-kii iyo horraantii 2008-dii.
Mudavadi ayaa soo gabagabeeyay socdaal labo cisho qaatay oo uu ku joogo ismaamulka Nyandarua.
Ra’iisul wasaare ku xigeenkii hore ee dalka ayaa sheegay in aan loo baahneyn in qof Kenyaan ah loo dhibaateeyo adeegsiga xuquuqdiisa dimuqraadiyadeed oo ay ka mid tahay inuu doorto hoggaamiyaha uu ku qanacsan yahay waxqabadkiisa.
Dadweynaha ayuu ku boorriyay in aan lagu kala qaybin ama la isku qabadsiin siyaasad qabiil ku saleysan.
Previous articleDHAGEYSO:In ka badan 500 oo qoys oo Mandera lagu siiyay kaarka caafimaadka ee NHIF
Next articleRa’iisul wasaare Rooble oo magacaabay guddiga xaqiijinta qoondada haweenka